गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : के समेटियो, के समेटिएन ? – हाम्रो देश
गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : के समेटियो, के समेटिएन ?
काठमाडौं : गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले यो सरकारको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले अधिकांश कार्यक्रम वितरणमा केन्द्रित गरेको छ ।
किसानलाई पुरस्कृत गर्नेदेखि आविष्कारका क्षेत्रमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहनसम्म सरकारका नीतिमा समेटिएका छन् । किशोरीलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने, दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधी दिने, निशुल्क रगत, महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क उपचारका कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
आउँदो वर्षका लागि सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रम बनाएको छ । भएभरका क्षेत्रलाई नीति र कार्यक्रममा हालेर सरकारले बजेट छर्न खोजेको आरोप प्रतिपक्षीको छ । एमालेका सांसद तथा पुर्व मन्त्री रामशरण बस्नेतले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको पुर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्ती नहुने बताए । ‘सुनेको जति सबै, बुझेको जति सबै, अरुले सुनाएका जति सबै ल्याएपछि बजेट कसरी आउँछ होला ?,’ उनले भने, ‘हजारौं योजना बन्ने र बजेट साह्रै सानो बन्ने भयो भने उपलब्धी त लिन सकिँदैन ।’
यही वर्ष निर्वाचनमा होमिने भएकोले सरकार चुनाव केन्द्रीत योजनामा लागेको छ । पोखराबाट मृगौला प्रत्यारोपण गराउने दाबी गरेको छ । यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट आउँदा सरकारको बजेटको मात्रा पनि उल्लेख्य बढ्नुपर्छ । तर, बजेट ३६ अर्वभन्दा नबढ्ने निश्चित प्रायः छ । चालू वर्षमा ३० अर्वको बजेट कार्यान्वयन भैरहेको छ । स्वास्थ्य, कृषि र महिलाका कार्यक्रममा सरकारको जोड बढी देखिन्छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न र कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नमा केन्द्रित हुनेगरी प्रदेश बैंक स्थापना गर्ने बताएको छ ।